Mirayiridzo Yepakati Pevhiki
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Acholi Afrikaans Ahanta Aja Albanian Altai Alur Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Attié Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Boulou Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chokwe Chol Chopi Chuabo Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik Ewe Fante Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kabuverdianu Kachin Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuGermany Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Bolivia) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Serbia) Ronga Russian Samoan Sango Sena Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yacouba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Mirayiridzo yeMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu
Panoshanya Mutariri Wedunhu
Vhiki reGungano Redunhu Kana Kuti Remunharaunda
Mutariri weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu
Sachigaro weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu
Murongi Mudare Revakuru
Anopa Zano Wechipiri
1. Musangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu uchaitwa sezvinoratidzwa muPurogiramu Yezvekuita Uye Zvichadzidzwa uyewo maererano nemirayiridzo inotevera. Vaparidzi vese vanofanira kukurudzirwa kuti vanyoresewo kuti vazoita zvikamu zvevadzidzi. Vamwewo vanenge vachipinda misangano nguva dzese vanogona kunyoresa kana vachiwirirana nedzidziso dzeBhaibheri uye vachirarama maererano nezvarinotaura.​—be p. 282.
2. Mashoko Ekusuma: Maminitsi 3 zvichidzika. Vhiki yega yega, panopera rwiyo nemunyengetero zvekutanga, sachigaro weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu achaita kuti vanhu vatarisire kunzwa zvichadzidzwa zuva iroro, uyewo achataura nezvemubvunzo uri muPepa Remhinduro dzeMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu.
3. Pfuma Iri muShoko raMwari:
Hurukuro: Maminitsi 10. Musoro wehurukuro yacho nepfungwa mbiri kana nhatu dzinokosha zvinowanika muPurogiramu Yezvekuita Uye Zvichadzidzwa. Hurukuro iyi inofanira kupiwa nemukuru, kana kuti mushumiri anoshumira anogona kudzidzisa. Patinotanga rimwe bhuku reBhaibheri pakuverenga Bhaibheri kwevhiki nevhiki, pacharatidzwa vhidhiyo inosuma bhuku racho. Mukurukuri anogona kutaura pfungwa dziri muvhidhiyo dzinoenderana nemusoro wehurukuro yacho. Asi anofanira kuva nechokwadi chekuti ataurawo pfungwa dzese dzehurukuro yake dzinenge dziri muPurogiramu Yezvekuita Uye Zvichadzidzwa. Kana nguva iripo, anofanirawo kushandisa mapikicha nepfungwa zviripo, izvo zvinenge zvichinyatsoenderana nenyaya inenge ichitaurwa nezvayo.
Kuchera Pfuma muShoko raMwari: Maminitsi 8. Chikamu ichi ndechemibvunzo nemhinduro, uye hachina sumo kana mhedziso. Chinofanira kupiwa nemukuru kana kuti mushumiri anoshumira anogona kudzidzisa. Mukurukuri anogona kuronga kuti mubvunzo mumwe nemumwe uchatora nguva yakadii zvichienderana nekuti ipfungwa dzipi dzinonyatsobatsira ungano. Asi anofanira kubvunza vateereri mibvunzo yese. Anogona kusarudza kuti pamibvunzo miviri yekutanga, mavhesi api achaverengwa pamubvunzo mumwe nemumwe. Vanenge vawana mukana wekupindura vanofanira kutaura kwemasekonzi 30 zvichidzika.
Kuverenga Bhaibheri: Maminitsi 4 zvichidzika. Hurukuro iyi inofanira kupiwa nehama. Mudzidzi wacho anofanira kuverenga asingapi sumo kana mhedziso. Sachigaro wemusangano wacho achabatsira vadzidzi kuti vaverenge zvakarurama, varatidze kuti vari kunzwisisa zvavari kuverenga, vatsetsenure, vasimbise pfungwa zvakakodzera, vasiyanise inzwi, vashandise nyora dzemitauro zvakakodzera, uye vaverenge sematauriro avo.
4. Shanda Nesimba Muushumiri: Maminitsi 15 zvichidzika. Chikamu ichi ndechekubatsira vanhu vese kuti vawane mukana wekudzidzira zvavachaita muushumiri uye kuvandudza unyanzvi hwavo hwekuparidza nekudzidzisa. Vadzidzi vanofanira kupa hurukuro yepaunoona munhu kekutanga uye yepaunodzokera vachishandisa mharidzo dzekuenzanisira dziri papeji 1 yePurogiramu Yezvekuita Uye Zvichadzidzwa. Kana vachida, vaparidzi vanogona kuratidza saimba bhuku kana kuti vhidhiyo kubva pane zviri muBhokisi reMaturusi Ekudzidzisa. Purogiramu Yezvekuita Uye Zvichadzidzwa inenge iine nguva yehurukuro imwe neimwe yevadzidzi uye pane dzimwe nguva inenge iine mimwe mirayiridzo. Vadzidzi vanofanira kungoshandisa zvinhu zvavakanzi vashandise kwete kutsvagiridza mamwe mashoko vachiitira kuti nguva yavo inyatsokwana. Kana vakanyatsogadzirira, vanogona kutopedza chikamu chavo vachitosiya miniti kana kuti inoti pfuurei miniti. Vakuru vanogona kupiwawo hurukuro idzi apo neapo.
Mavhidhiyo eMharidzo Dzekuenzanisira: Vhiki rimwe nerimwe mwedzi wega wega, pacharatidzwa vhidhiyo yemharidzo yekuenzanisira uye yokurukurwa. Mavhidhiyo aya acharatidza zvinoitwa paunoona munhu kekutanga, paunodzokera kekutanga uye paunodzokera kechipiri. Chikamu ichi chichaitiswa nasachigaro weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu.
Paunoona Munhu Kekutanga: Hurukuro iyi inogona kupiwa hama kana hanzvadzi. Kana ikapiwa hama, mubatsiri wacho anofanira kuva munhu wemumhuri yake kana kuti imwe hama yemuungano. Kana ikapiwa hanzvadzi, mubatsiri wacho anofanira kuva munhu wemumhuri yavo kana kuti imwe hanzvadzi yemuungano. Mudzidzi wacho nemubatsiri wake vanogona kukurukura vakagara kana kuti vakamira. Mudzidzi anofanira kukwazisa saimba maererano nezvinoitwa munharaunda yacho. Anofanira kushandisa mharidzo yekuenzanisira.
Paunodzokera Kekutanga: Hurukuro iyi inogona kupiwa hama kana hanzvadzi. Kana ikapiwa hama, mubatsiri wacho anofanira kuvawo hama, kana iri hanzvadzi mubatsiri wacho anofanira kuvawo hanzvadzi. (km 5/97 p. 2) Mudzidzi wacho nemubatsiri wake vanogona kukurukura vakagara kana kuti vakamira. Mudzidzi wacho anofanira kuenzanisira zvaanoita paanodzokera kunoona munhu akafarira. Anofanira kushandisa mharidzo yekuenzanisira iri muPurogiramu Yezvekuita Uye Zvichadzidzwa.
Paunodzokera Kechipiri: Hurukuro iyi inogona kupiwa hama kana hanzvadzi. Kana ikapiwa hama, mubatsiri wacho anofanira kuvawo hama, kana iri hanzvadzi mubatsiri wacho anofanira kuvawo hanzvadzi. (km 5/97 p. 2) Mudzidzi wacho nemubatsiri wake vanogona kukurukura vakagara kana kuti vakamira. Mudzidzi wacho anofanira kuenzanisira zvaanoita paanodzokera kechipiri kunoona munhu akafarira. Anofanira kushandisa mharidzo yekuenzanisira.
Chidzidzo cheBhaibheri: Hurukuro iyi inogona kupiwa hama kana hanzvadzi. Kana ikapiwa hama, mubatsiri wacho anofanira kuvawo hama, kana iri hanzvadzi mubatsiri wacho anofanira kuvawo hanzvadzi. (km 5/97 p. 2) Mudzidzi wacho nemubatsiri wake vanogona kukurukura vakagara kana kuti vakamira. Hurukuro iyi inofanira kuratidza chidzidzo cheBhaibheri chinenge chitori pakati pekuitiswa. Mudzidzi haafaniri hake kutaura mashoko ekusuma kana kuti emhedziso kunze kwekunge chiri icho chidzidzo chaari kushandira. Hazvirevi hazvo kuti ndima dzese dzinenge dziri pahurukuro iyi dzinofanira kuverengwa, asi kana vachida vanogona kudziverenga. Unyanzvi hwekudzidzisa ndihwo hunofanira kuratidzwa.
Hurukuro: Chikamu ichi chinofanira kuitwa nehama.
5. Kurarama kwechiKristu: Pashure perwiyo, maminitsi 15 anozotevera achange aine chikamu chimwe chete kana zviviri zvichabatsira vateereri kuti vangashandisa sei Shoko raMwari. Zvikamu izvi zvinogona kupiwa nevakuru, kana kuti vashumiri vanoshumira vanogona kudzidzisa, kunze kwekunge pakanyorwa kuti ndiani anofanira kupa. Asi chikamu chakanzi zvemuungano yenyu chinofanira kupiwa nemukuru.
Chidzidzo cheBhaibheri Cheungano: Maminitsi 30. Chinofanira kupiwa mukuru anokwanisa kudzidzisa. (Kana paine vakuru vashoma, vashumiri vanoshumira vanogona kudzidzisa vanogona kunzi vaitise.) Dare revakuru ndiro rinosarudza vanokwanisa kuitisa Chidzidzo cheBhaibheri Cheungano. Vaya vanenge vanzi vaitise vanofanira kuitisa chidzidzo chacho nemazvo vasingadyi nguva, vachisimbisa magwaro ane pfungwa huru uye vachibatsira munhu wese kuti aone kushanda kwezviri kudzidzwa. Kana vakatarisa mirayiridzo yekuitisa Chidzidzo cheNharireyomurindi zvichavabatsira. Kana zvichiita, sarudzai vaitisi uye vaverengi vakasiyana-siyana vhiki imwe neimwe. Kana sachigaro akati chidzidzo chacho chipfupikiswe, muitisi achafanira kusarudza kuti achazviita sei. Anogona kusarudza kuti dzimwe ndima dzisaverengwa.
6. Mashoko Ekugumisa: Maminitsi 3 zvichidzika. Sachigaro weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu achadzokorora pfungwa dzinobatsira dzinenge dzabuda pamusangano kusanganisira mubvunzo nemhinduro zvinenge zviri muPepa Remhinduro dzeMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu. Anofanirawo kutaura muchidimbu zvichakurukurwa vhiki rinotevera. Anogona kutaura nezvemubvunzo uchakurukurwa pamusangano wevhiki rinotevera uye kutaura mazita evadzidzi vevhiki rinotevera kana nguva ichiripo. Sachigaro anofanira kupa zviziviso uye kuverengera ungano tsamba paanenge achipa mashoko ake ekugumisa, kunze kwekunge paine mimwe mirayiridzo. Zvinhu zvinogara zvichiitwa, zvakadai sepurogiramu yekubuda mubasa remumunda uye yekuchenesa, hazvifaniri kuziviswa pachikuva, asi zvinofanira kuiswa pabhodhi rezviziviso. Kana nguva yekuti sachigaro ataure mashoko ekugumisa isingakwani kuti ape zviziviso uye kuti averenge tsamba, anofanira kukumbira hama dzinenge dziine zvikamu paKurarama kwechiKristu kuti dzimusiyirewo nguva. (Onai ndima 5 ne 9.) Musangano wacho uchapera nerwiyo nemunyengetero.
7. Shingairira Kuverenga Nekudzidzisa: Kutanga nevhiki raJanuary 7, 2019, sachigaro weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu anofanira kushandisa bhurocha raKudzidzisa paanenge achirumbidza vadzidzi kana kuti achivapa zano. Mudzidzi mumwe nemumwe anofanira kushandira chidzidzo chinenge chiri muzvikomberedzo chinenge chichiratidzwa pahurukuro yake muPurogiramu Yezvekuita Uye Zvichadzidzwa. Vhiki rekutanga remwedzi mumwe nemumwe, sachigaro achakurukura nevateereri chidzidzo chimwe chete kubva mubhurocha raKudzidzisa. Chikamu chiri mubhurocha iri chakanzi “Maka Chidzidzo Chaunenge Waita” ndechekuti mudzidzi ashandise kwete kuti sachigaro amake.
8. Zano: Panopera hurukuro imwe neimwe yevadzidzi, sachigaro weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu ane inenge miniti imwe chete yekutaura zvakanaka zvaitwa uye kupa zano achishandisa bhurocha raKudzidzisa. Paanosuma hurukuro yemudzidzi, haazivisi chidzidzo chaari kushandira. Asi mudzidzi paanenge apedza hurukuro yake uye audzwa zvakanaka zvaaita, sachigaro anogona kuzivisa chidzidzo chaanga achishandira, otaura kuti sei achiti mudzidzi aita zvakanaka kana kuti otsanangura nemutsa kuti nei zvakanaka kuti mudzidzi avandudze pachidzidzo ichocho. Sachigaro anogona kutaura zvimwewo zvakanaka zvaanenge aona kana achifunga kuti zvinogona kubatsira mudzidzi kana kuti vateereri. Mudzidzi anogona kupiwa zano rinovaka rinobva mubhurocha raKudzidzisa kana kuti bhuku reChikoro Choushumiri pasiri paruzhinji musangano wacho wapera kana kuti pane imwe nguva. Zano racho rinogona kunge riine chekuita nechidzidzo chaanga achishandira kana kuti chimwewo.​—Onai ndima 13 ne 16 dzinotaura nezvebasa remutariri weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu uye reanopa zano wechipiri.
9. Nguva: Hapana chikamu chinofanira kupfuudza nguva, kunyange mashoko asachigaro weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu. Kana mudzidzi ava kupfuudza nguva anofanira kumiswa nekungwarira. Kana vane zvimwe zvikamu zvemusangano vapfuudza nguva, anopa zano wechipiri anofanira kuvapa zano vari vega. Musangano wacho wese, kusanganisira nziyo neminyengetero zvinofanira kuita awa imwe chete nemaminitsi 45.
10. Panoshanya Mutariri Wedunhu: Kana ungano ichishanyirwa nemutariri wedunhu, musangano unofanira kuitwa sezviri muPurogiramu Yezvekuita Uye Zvichadzidzwa. Zvinotevera chete ndizvo zvichachinja: Chidzidzo cheBhaibheri Cheungano, icho chiri pachikamu cheKurarama kwechiKristu, chichatsiviwa nehurukuro yebasa yemaminitsi 30 inopiwa nemutariri wedunhu. Hurukuro yebasa isati yatanga, sachigaro weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu achadzokorora muchidimbu purogiramu inenge ichangobva kuitwa, otaura muchidimbu nezvepurogiramu yevhiki rinotevera, opa zviziviso, uye kuverenga tsamba, obva azosuma mutariri wedunhu. Panopera hurukuro yebasa, mutariri wedunhu achagumisa musangano wacho nerwiyo rwaanenge akasarudza. Hapana mamwe makirasi anofanira kuitwa panoshanya mutariri wedunhu. Boka remumwe mutauro rinenge richitungamirirwa neungano inenge yashanyirwa nemutariri wedunhu rinogona kuita misangano vhiki rinenge rashanya mutariri wedunhu uyu. Asi rinofanira kuzobatana neungano kuti rinzwe hurukuro yebasa yemutariri wedunhu.
11. Vhiki reGungano Redunhu Kana Kuti Remunharaunda: Muvhiki regungano, hapana misangano yeungano inoitwa. Munofanira kudzidza zvinenge zviri pamisangano yemavhiki iwayo semhuri kana kuti semunhu mumwe nemumwe.
12. Vhiki reChirangaridzo: Kana kuri kuti Chirangaridzo chiri kuitwa mukati mevhiki, vhiki racho kunenge kusina musangano wepakati pevhiki. Asi misangano yebasa remumunda inofanira kuitwa kunyange nemusi weChirangaridzo.
13. Mutariri weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu: Mukuru anenge akasarudzwa nedare revakuru achashanda seMutariri weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu. Basa rake nderekuona kuti musangano uyu wakanyatsorongeka uye kuti uri kuitwa maererano nemirayiridzo iyi. Anofanira kugara achikurukura neanopa zano wechipiri. Kana Purogiramu Yezvekuita Uye Zvichadzidzwa yemumwe mwedzi yangovapo, Mutariri weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu anobva atoronga purogiramu yevadzidzi yemwedzi wacho. (Onai ndima 4.) Mudzidzi mumwe nemumwe anofanira kupiwa fomu reZvauchaita paMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu (S-89) pachiine mavhiki matatu kana kupfuura.
14. Sachigaro weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu: Vhiki rega rega, mukuru mumwe chete achashanda sasachigaro weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu. (Kana vakuru vari vashoma, panogona kushandiswa vashumiri vanoshumira vanogona kudzidzisa.) Anofanira kugadzirira mashoko ekusuma neekugumisa, kukurukura zviri mumavhidhiyo emharidzo dzekuenzanisira uye mavhidhiyo ekusuma chidzidzo chimwe nechimwe chebhurocha raKudzidzisa. Achasuma zvikamu zvese, uye achaitisa zvimwe zvikamu pamusangano wacho zvichienderana nekuti mune vakuru vakawanda sei muungano yacho. Anofanira kutaura mashoko mashoma pakusuma kana pakutenda vanenge vapa hurukuro. Dare revakuru ndiro richasarudza kuti vakuru vapi vanokwanisa kuita basa iri. Vakuru vanenge vachikodzera vachachinjana pakuita basa iri. Mutariri weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu anogona kuva sachigaro kakati wandei kupfuura vamwe vakuru vose vanokwanisa zvichienderana nekuti ungano yenyu yakamira sei. Kana mukuru achikwanisa kuitisa Chidzidzo cheBhaibheri Cheungano, anogona kunge achikwanisawo kuva sachigaro wemusangano uyu. Mukuru anenge ari sachigaro anofanira kuzotaura zvakanaka zvinenge zvaitwa nevadzidzi uye kuvapa zano zvine rudo. Sachigaro anewo basa rekuona kuti musangano wapera nenguva. (Onai ndima 6 ne 9.) Kana sachigaro achida uye kana pachikuva paine nzvimbo, anogona kushandisa imwe maikorofoni inenge iri pachikuva kuitira kuti paanenge achisuma chikamu chimwe nechimwe hama ine chikamu chacho inge yatomira papodhiyamu. Sachigaro anogonawo kugara kuchikuva vadzidzi pavanenge vachipa hurukuro dzavo. Izvi zvinogona kuchengetedza nguva.
15. Murongi Mudare Revakuru: Murongi mudare revakuru ndiye achasarudza vanhu vachange vaine zvekuita pamusangano wacho wese kunze kwezvikamu zvevadzidzi chete. Izvi zvinosanganisira kusarudza achange ari sachigaro wemusangano vhiki rimwe nerimwe kubva pane vanenge vakabvumirwa nedare revakuru. Pashure pekunge murongi mudare revakuru akurukura neMutariri weMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu, anofanira kuva nechokwadi chekuti imwe purogiramu yevanenge vaine zvekuita pamusangano wacho wese yaiswa pabhodhi rezviziviso.
16. Anopa Zano Wechipiri: Kana zvichiita, zvakanaka kuti basa iri ripiwe mukuru ava neruzivo rwekukurukura. Basa reanopa zano wechipiri richava rekupa zano pasiri paruzhinji, kuvakuru kana kuti vashumiri vanoshumira pazvinenge zvakakodzera pahurukuro chero ipi zvayo yavangapa, kusanganisira zvikamu zveMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu, hurukuro dzavose, uye kuverenga kana kuti kuitisa Chidzidzo cheNharireyomurindi neChidzidzo cheBhaibheri Cheungano. (Onai ndima 9.) Kana muungano yenyu muine vakuru vakawanda vanonyatsokwanisa kukurukura uye kudzidzisa, vanogona kuchinjana gore rimwe nerimwe pakuita basa iri. Hapasi pese pekuti vakuru kana kuti vashumiri vanoshumira vanofanira kupiwa zano pavanenge vaita zvikamu zvavo.
17. Mamwe Makirasi: Zvichienderana nenhamba yevadzidzi, ungano dzinogona kuva nemamwe makirasi evadzidzi. Kirasi imwe neimwe inofanira kuva neanopa zano anonyatsogona kudzidzisa, uye zvinganaka kana akava mukuru. Pazvinenge zvakakodzera, mushumiri anoshumira anonyatsokwanisa anogona kuita basa iri. Dare revakuru rinofanira kusarudza kuti ndiani anofanira kuita basa iri uye kuti ogara achiitisa ega here kana kuti ochinjana nevamwe. Anopa zano anofanira kutevedzera zviri mundima 8. Kana pachizova nemamwe makirasi, vadzidzi vanofanira kuenda kumakirasi avo kana chikamu cheKuchera Pfuma muShoko raMwari chapera, icho chiri pasi pemusoro unoti Pfuma Iri muShoko raMwari. Vanofanira kubatana neungano yese panopera chikamu chakanzi Shanda Nesimba Muushumiri. Vhidhiyo painenge ichikurukurwa, vari mune imwe kirasi vanofanira kuona kana kuteerera vakagara mukirasi imomo kana zvichiita. Kana kuti anopa zano mukirasi yavo anogona kuvaratidza uye kukurukura navo vhidhiyo yacho achishandisa tablet kana foni.
18. Mavhidhiyo: Pane mavhidhiyo achashandiswa pamusangano uyu. Mavhidhiyo aya achange achiwanika paJW Library app pamatablet, mafoni nemakombiyuta. Dzimwe nguva, mavhidhiyo emharidzo dzekuenzanisira anogona kuratidzwa vanhu pamisangano yebasa remumunda pashure pekunge vanhu vaaona paMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku Mirayiridzo yeMusangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu